Murugada Caruurta iyo Dhalinyarta
Dad badan ayaa mararka qaar dareema murugo, dareemida murugaduna waa qeyb caadi ah oo nolosha ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, caruurta iyo dhalinyarta mar walba murugada dareema, badanaa, waqti badanna haysa, waxaa laga yaabaa inay qabaan shucuur fowdo ah oo lagu magacaabo murugo.
Waa Maxay Calaamadaha Lagu Garto Murugta Ku Dhacda Caruurta iyo Dhalinyarta?
Caruurta iyo dhalinyarta waxaa laga yaabaa in shucuurta fowdo ku cabiraan iyo murugooda, xanaaq dhow, ama aad u qoonsi badan. Qaar lagu garto calaamadaha murugada waxaa ka mid ah:
Si joogto ah u dareemid rajo la’aan, qiimo la’aan, is eedeyn, ama is ixtiraam hoose
Hoos u dhac xiisaha uu u hayo waxyaalo uu markii hore sameyntooda uu jeclaan jiray
Tamar beelid iyo wax ku dhaqaajiya la’aan iyo caajis joogto ah
Dhib ku qabid inuu awoodiisa isugu geeyo si uu wax u fahmo
Isbedelo weyn oo ku yimaada rabitaankiisa cunnada iyo miisaankiisa jireed
Iska soocid bulshada ama hoos u dhac dad la xiriirkiisa
Inuu mar walba ka fikiro dhimasho, inuu is dhaawaco, ama inuu isdilo
Inuu mar walba jirkiisa ka cawdo sida madax xanuun, murqo xanuun, calool xanuun ama daal
Xanaaq siyaado ah, xanaaq dhowaansho, cadowsasho ama dabeecado khatar ah
La qiiroosho ooyin, qeylo, cabasho ama xanaaq dhow oo aanan la fasiri karin
Ka maqnaansho iskuulka oo joogto ah ama howl qabashada iskuuulka oo heerkooda hooseeyo
Si khaldan u isticmaalid alkolo ama daroogo.
Waxaa laga yaabaa inay caruurta iyo dhalinyarta ay dhib ku qabaan inay gartaan ama sharxaan qiiradooda iyo dareenkooda. Waxaa laga yaabaa inaysan weli aqoonin sidii ay ereyo ahaan nafsadooda ugu cabiri lahaayeen. Waxaa laga yaabaa inay dabeecadooda ku cabiraan sida ay dareemayaan. Waxay dadka waaweyn mararka qaar si khaldan uga terjumaan dabeecadahaan iyagoo u qaata inay iska yeelyeelayaan ama ay amar diidayaan, balse waxaa laga yaabaa inay calaamado u tahay murugo.
Waxaa sidoo kale jira xaalado kale oo caafimaad iyo dhimireed. Kuwaasoo leh calaamado la mid ah kuwa murugada. Waxaana macquul ah in ilmo uu hayo murug ama xanuunsanaan kale sida jiro walwal ama curyaannimo dhinaca barashada ah. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah inuu qiimeyn buuxda uu ka helo dhakhtar ku takhasusay sida saxda ah ee lagu aqoonsado cudurka.
Waa Maxay Waxyaalaha Sababa Xanuunka Murugada?
Sababta saxda ah ee keenta badanaa xanuun dhimireedka. Guud ahaan, xanuun dhimireedka waxay natiijo u tahay fir iyo asbaabo kale oo noolaha la xiriira oo isku dhafan iyo korniinka iyo asbaabo deegaaneed. Isa saameynta u dhaxeysa noolaha iyo deegaanka waa mid adag. Maxkaxdu waxay saameysaa dabeecadda, khibaraduna waxay saameysaa koritaanka maskaxda.
Murugada waxay saamaysaa qoyska, taasoo dalbaysa in dayacnaanta la iska dhaxli karo. Asbaabo kale oo dheeri ah , waxaa ka mid walwalka ka jira guriga, iskuulka, ama shaqada, sidoo kale dhacdo walwaleedka nolosha sida dhimashada, ama xanuunka daba dheeraada ayaa iyagana sabab noqon kara.
Sidee Walwalka Caruurta iyo Dhalinyarta Loo Daweeyaa?
Caruurta iyo dhalinyarta welwelsan ma ahan kuwa shakhsi ahaan daciif ah, dabeecadoodana cilad ma laha. Dareenkooda walwalka waa xaqiiqo dhab ah, suuragalna ma aha in laga fisho inay is farxad geliyaan. Caruurta iyo dhalinyarada walwalku hayo waxay u baahan yihiin daaweyn, walwalkoodana waa mid la daaweyn karo.
Daawo dabiici ahaan, daraasaduhu waxay muujiyeen in garashada dabeecada ama daaweyn gudaha shakhsiga ay caawinaad u tahay dadka la il daran welwelka. Labadan daawo waxay dhalinyarada ka caawiyaan inay ahmiyad siiyaan xiriirka shakhsiga kharibmay iyo si khaldan u fikirka badanaa la xiriira welwelka. Daawooyinka kale waxaa ka mid ah daawooyin koox ama qoyska. Waxaa jira baaritaano cilmiyeed koraya oo la xiriira isticmaalka daawooyinka si loo daweeyo welwelka caruurnimada.
Ugu horeyntii, la tasho dakhtarka ilmahaaga. Ilmahaaga u dalab baaritaan caafimaad dhamaystiran. Takhtarkaaga u sheeg haday jiraan dabeecado dareen kugu haya. Weydii takhtarkaaga haddii qiimeyn dheeri ah ama daaweyn uu sameeyo dakhtar ku takhasusay
mashaakil dabeecadeed ee ilmaha loo baahan yahay.
Ururka Samafalka Qaranka ee Xanuunka Walwalka, Inc.